पटकपटकको संसद विघटनले मुलुकमा दलीय व्यवस्था अफाब सिद्ध – सुनाखरी न्युज
पटकपटकको संसद विघटनले मुलुकमा दलीय व्यवस्था अफाब सिद्ध
Posted on: December 21, 2020 - 9:53 am
राकेश कुमार शर्मा – पटकपटक को संसद विघटनले मुलुकमा दलीय व्यवस्था अफाब सिद्ध । दलीय व्यवस्था भनेको एकदमै उत्कृष्ट व्यवस्था हो तर पटकपटक को संसद विघटनले हाम्रो मुलुकको लागि दलीय व्यवस्था अफाब सिद्ध भएको छ । मुलुकको विगतको घटनाक्रममा पनि सजिलो समयमा दलहरू बीच एक आपसमा खिचातानी मतभेद नहुँदा काँग्रेसले एकलौटी बहुमतको सरकार चलाउन सकेन त्यस्तै कसैले विरोध गर्दा नगर्दै प्रचण्डले पनि एक्कासि प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका थिए हामी सबैलाई जगजाहेर नै छ ।
राजनीतिक दलहरू असफल भएको कारण नै आज दुई तिहाइको कम्युनिस्ट सरकारले संसद विघटन गर्नुपर्ने अवस्था आयो । मुलुकमा राजनीतिक दलहरूका नेताहरूले निकास दिन नसक्ने अनिर्णयको बन्दी बनाउने अब सेनाहरु अर्थात राजाले `कु´गरे भने सेनाहरुलाई र राजालाई दोष दिन मिल्छ ? मुलुकमा संसद विघटन पश्चात तत्काल सेनाहरुले शासन सत्ता आफ्नो अधिनमा लिनुपर्छ । सेनाहरुलाई मेरो प्रश्न मुलुकको सेना हो कि ? राजनीतिक दलहरूको सेना हो ? मुलुकको काठमाडौ उपत्यका लगायतका स्थानहरुमा रहेको सेनाहरुको संगठन भद्रकाली जंगी अड्डा, पृतनाहरु, गणहरु र गुल्महरु मुलुकको सेनाको हो कि ? राजनीतिक दलहरूको सेनाको हो भन्ने प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ ?
राजनीतिक दलहरूको नेताहरूको कारण मुलुकले निकास पाएन दुई तिहाई कम्युनिस्टको सरकारले संसद विघटन गर्नुपर्ने अवस्था आयो । मुलुकमा जताततै विकृति, बेथिति, अराजकता, ढण्डहीनता बढदै गएको र मुलुकमा लथालिङ्ग अवस्था छ । सेनाहरुले सत्ता कब्जा गर्न ढिलाइ गरेको किन ? सेनाहरुले पहिलो नम्बरमा बुझ्नुपर्ने कुरा मुलुक भन्दा ठुलो संविधान होइन त्यस्तै मुलुक भन्दा ठुलो विधा भण्डारी, के.पी. शर्मा ओली, माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, प्रचण्ड, नारायणकाजी श्रेष्ठ, अग्नि सापकोटा, बाबुराम भट्टराई, रामचन्द्र पौडेल र शेर बहादुर देउवा लगायतका नेताहरू पनि होइन । सेनाहरुले दोस्रो नम्बरमा बुझ्नुपर्ने कुरा वीर बलबहादुर कुँवर, श्री ३ जंग बहादुर राणा, बडामहाराजधिराज पृथ्वीनारायण शाह, श्री ५ महेन्द्र शाह, एडोल्फ हिटलर र किम जोंग पनि सेनाहरु नै हुन । यसकारण मुलुकमा तत्काल सैनिक शासनको खाँचो छ ।
सेनाहरुले मुलुकको परिस्थितिलाई मध्य नजर गर्दै वीर बलबहादुर कुँवर, श्री ३ जंग बहादुर राणा, बडामहाराजधिराज पृथ्वीनारायण शाह, श्री ५ महेन्द्र शाह, एडोल्फ हिटलर र किम जोंग मध्ये सेनाहरुले कुन रुप अर्थात कुन अवतार धारण गर्नुपर्ने हो सो निर्णय सेनाहरुले नै लिनुपर्छ । मुलुकमा शीर्ष नेताहरूको रमिता, नाटक मंचन र खेलाची अति भो ? मुलुकको सेना हो भने सेनाहरुले मुलुकको हितमा अब तत्काल ठोस निर्णय अर्थात कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ ।